Teknụzụ - Teknụzụ nzacha
R&D dabere n'ahịa
Anyị na -ebute mkpa na ọchịchọ nke ahịa ụzọ iji mepụta ngwaahịa na -egbo mkpa gị. Anyị na -ebuli Pọtụfoliyo ngwaahịa anyị yana usoro ngwaahịa na teknụzụ ohuru iji nye azịza dị iche ma belata usoro mmepe ngwaahịa. Azịza ngwa ngwa n'ahịa na ngwọta nkeonwe anyị na -enyere anyị aka inweta asọmpi karịa n'ọma ahịa.
Mmepe nke teknụzụ na-akwalite
Patent maka ihe ọhụrụ
Ikike nchọpụta maka Model Utility
Patent maka Mpụta Mpụta
Teknụzụ ihe mejupụtara mejupụtara
Ihe na -eme ezigbo ahụmịhe onye ọrụ karịrị nnọọ inye gị ihe ị rịọrọ. Anyị na -achụso ebumnuche iji nye gị ahụmịhe onye ọrụ ka mma site na inyere gị aka na teknụzụ pụọ na nsogbu gị kwa ụbọchị. Ka anyị na -elekwasị anya na nyocha na itinye teknụzụ nzacha mmiri dị elu, anyị enwetala nnukwu arụmọrụ n'ihe gbasara nchekwa ngwaahịa, ahụmịhe onye ọrụ yana uru gburugburu ebe obibi.
Teknụzụ mmiri na -eri mmiri nke amachibidoro
Anyị nwere ikike ikike maka teknụzụ dị ka bọọdụ mmiri jikọtara ọnụ, nchedo mgbapụta mmiri, nchedo ụkọ mmiri, nnọchi nzacha enweghị nsogbu, njikwa nwere ọgụgụ isi, mwepụta VC, ịchekwa ike, wdg. Site na nkwado ọrụ aka anyị siri ike, anyị na -ewetara gị uru azụmahịa dị ka ngwaahịa na ika gị ga -apụta ma rụọ ọrụ nke ọma n'ọma ahịa asọmpi.
Iji mee mgbanwe na mgbanwe teknụzụ, anyị ehiwela mmekọrịta miri emi na mahadum dị iche iche a ma ama nwere na nyocha na mmepe mgbasa ozi nzacha. Site na ịkekọrịta teknụzụ anyị na -akwalite ikike ọhụrụ anyị nke na -enyere anyị aka inweta ike karịa ma nye gị uru dị egwu. Taa Filter Tech etolitela n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama obodo.
Otu R&D nke ọma
Anyị nwere ndị otu R&D nke ọma nwere ihe karịrị ndị injinia 120. Ha na -enye gị ihe nzacha mmiri site na echiche ndị ọkachamara dị iche iche.
Mkpa gị na ihe ị chọrọ ga -ebute ụzọ. Anyị na -eme nyocha ahịa oge niile ma na -eji usoro R&D ngwaahịa emepụta atụmatụ ngwaahịa n'ụzọ kwekọrọ na ya. Anyị na -enye gị ngwaahịa mkpocha mmiri ụlọ ahaziri iche nkeonwe ahaziri iche site na ntinye wee ruo ebe eji eme ihe.
N'ịchọ iji echiche na -akpali akpali wetara ngwaahịa ahụ mma na ihe ọchị, anyị na -enye gị atụmatụ ngwaahịa site na echiche okike anyị na ikike imewe pụrụ iche, na -enyere gị aka ijide usoro ahịa wee ree nke ọma.
Iji gbanwee echiche na -akpali akpali ka ọ bụrụ ngwaahịa ga -ekwe omume, site n'inwe nghọta zuru oke nke nkọwa ngwaahịa, anyị na -eme atụmatụ na mmepe ziri ezi iji hụ na etolitere ngwaahịa a na ọnụ ala, n'oge dị mkpirikpi, mana ọ nwere ogo dị elu.
Sistemụ osmosis kacha mma, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Njikere nzacha, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri,